Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu wax ku oolsan ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun loogu jirado ama loogu dhinto. Waxa uu tallaalku sidoo kale gacan ka geysanayaa dhimista faafitaanka cudurka covid-19 ee bulshada dhexdeeda. Waxa sidaa darteed muhiim ah inay dad badani doortaan inay is tallaalaan.
Waxa halkan ku yaala talo la siinaayo qofka cudurka covid-19 qaba. Waxay taladu khuseysaa qofka guriga joogi kara ee aan u baahnayn in daryeel cisbitaal lagu siiyo. La xiriir daryeelka caafimaadka haddii aad ka sii jirato/xanuunsatid.
Waaxda tallaalka ee Gobolka Västernorrland ballan ka qabso
Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - somaliska
Haddii 16 sano aad buuxsatay ama da'daada ka wayn tahay, waxaad imminka ballansan kartaa tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]. Halkaan hoos ka eeg liiska waaxyada layska tallaalo oo aad ballan ka qabsan karto.